E zigara ịdọ aka na ntị nke Federal Trade Commission, ihe karịrị 90 ozi ịntanetị kpọmkwem na ndị ahịa na ndị na-emetụta ha, gụnyere ndị na-eme ihe nkiri na ndị egwu dịka Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Sofia Vergara, Lindsay Lohan, Sophia Bush, Zendaya Coleman, Jennifer Lopez , Luke Bryan, na Sean Combs. Anyị edeela banyere nkwupụta na mbụ, mana ọ na-eju m anya na ọnụọgụ ndị na-eleghara ịkekọrịta mmekọrịta ego ma ọ bụ nke azụmahịa ha na ụlọ ọrụ ndị a
Afọ 44 gara aga, Raymond Tomlinson na-arụ ọrụ na ARPANET (ihe gọọmentị US ga-eme na Internetntanetị nwere ihu ọha), ma mepụta email. Ọ bụ nnukwu ọrụ n'ihi na ruo oge ahụ, enwere ike izipu ozi ma gụọ n'otu kọmputa ahụ. Nke a kwere ka onye ọrụ na ebe ebewapụrụ site na akara ngosi. Mgbe ọ gosipụtara onye ọrụ ibe ya Jerry Burchfiel, nzaghachi ya bụ: Agwala onye ọ bụla! Nke a abụghị ihe anyị kwesịrị ịrụ ọrụ
Edebere iwu United States na-ekpuchi ozi email azụmahịa na 2003 n'okpuru Iwu Federal Trade Commission nke CAN-SPAM. Ezie na ọ karịrị afọ iri… M ka na-emeghe igbe mbata m kwa ụbọchị na-achọghị na email nwere ma ụgha ozi na-enweghị usoro iji pụọ. Amaghị m na otu iwu si dị irè na-enwe ihe iyi egwu nke ihe ruru $ 16,000 maka iwu ọ bụla. N'ụzọ na-akpali mmasị, Iwu CAN-SPAM anaghị achọ ikike iji zipu ozi-e